१ कोरिन्थी ६:१९-२० – Word of Truth, Nepal
“तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्‍वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ; किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्‍वरको महिमा गर, जो परमेश्‍वरका हुन्।”
ख्रीष्टियनहरूले कस्तो वस्त्र लगाउनु पर्छ भनेर यस खण्डले स्पष्ट पार्छ।
१) ख्रीष्टियनले लगाउने लुगाद्वारा परमेश्‍वरको महिमा हुनु पर्छ।
२) ख्रीष्टियनको लुगा लगाउने ढाँचा कामुकतासँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन।
जब कुनै विश्‍वासी परमेश्‍वरको महिमा हुने हिसाबले जिउँछ, ऊ सिद्धताको खातिर आफ्नो इच्छालाई त्याग्न तयार हुन्छ। ऊ आफूलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले होइन तर परमेश्‍वर पितालाई खुसी पार्ने उद्देश्‍यले जिउँछ।
माथि उल्लेखित पदहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा झल्किन्छ – विश्‍वासीले उसको आत्मामा मात्रै होइन तर शरीरमा पनि परमेश्‍वरको महिमा गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरको नजरमा हाम्रो हृदयको अवस्था महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण हाम्रो शरीरको पहिरन महत्त्वपूर्ण छैन भनेर कोही ख्रीष्टियनहरूले तर्क गर्छन्। हो, परमेश्‍वरको दृष्टिमा हृदयको अवस्था महत्त्वपूर्ण छ – र शरीरको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी कस्तो लुगा लगाउँछौं र आफ्नो शरीर केका लागि प्रयोग गरिरहेको छौं भनेर परमेश्‍वरले ख्याल राख्‍नुहुन्छ। त्यसकारण, हानिकारक चीज खानु वा पिउनु (जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी, नशालु पदार्थ, इत्यादी) विश्‍वासीको निम्ति असुहाउँदो हो। हाम्रो शरीर परमेश्‍वरको मन्दिर हो। परमेश्‍वरको मन्दिरलाई हानी पुर्‍याउनु हुँदैन।
लुगाको सन्दर्भमा के, त? परमेश्‍वरको मन्दिरले लगाएको लुगाद्वारा पुरुषहरूको मनमा पापपूर्ण विचार उठेको के परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न! हाम्रो जीवनको हरेक पक्ष पवित्र भएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ। जुन स्त्रीहरूले हृदयदेखि परमेश्‍वरको महिमा गर्न चाहन्छन् तिनीहरू अभिलाषासँग सम्बन्धित छन्।
हामीले अरुहरूलाई ठेस खुवाउनुहुँदैन भनेर रोमी १४:२१ ले बताउँछ।
“मासु नखानु, वा दाखमद्य नपिउनु, वा त्यस किसिमको कुनै काम नगर्नु नै असल हो, जसद्वारा तिम्रो भाइलाई ठेस लाग्दछ, लोदट्छ, वा कमजोर पारिँदछ।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-20 16:47:312020-04-28 14:07:10१ कोरिन्थी ६:१९-२०
तीतस २:४,५जाँचेर हेर!